Iindaba zesiXhosa, 11:00am, 31 eyoMqungu 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 11:00am, 31 eyoMqungu 2019
Written by Ashia Nkontsa on 31/01/2019
Indumezulu Gospel Show 2019 ..KWAGQITYWA!
Ijelo losasazo iZibonele fm livakalise ukuba sele likulungele ukusingatha umyhadala walo wanyaka-nanyaka womculo wokholo obizwa ngokuba yiNdumezulu Gospel Show. Lo myhadala kulindeleke ukuba ubanjwe ngomhla weshumi elinesithathu kwinyanga kaTshazimpuzi kwibandla i-Shekinah elizinze kummandla waseLuzuko cebu kuhle eLower Crossroads. Kulo nyaka abasemagunyeni kweli jelo bakrwece umakhwekhwetha kwezosasazo nowayesakuba ligosa lezonxibelelwano leqela leKaizer Chiefs umnumzana Mphuthumi ‘Putco’ Mafani khon’ukuze abe ngumphathi-theko phof’ebambisene nomsasazi weli jelo uTabita Busani. Ukanti phakathi kweemvumi ezichongelwe ukudyusha zitshintshiselana ngeqonga kule mnyhadala kuquka uHlengiwe Mhlaba,uDumi Mkokstad,uThobekile, uSipho Ngwenya kwakunye noPastor Ncanda. Ecacisa malunga noku umanejala weminyhadala yeli jelo unkosazana Ntebaleng Shete uthi le ngxikela yomculo wokholo yenziwe ngokukhethekileyo phambi kwelixa lePasika khon’ukuze abantu bakekelele kwiPasika behlaziyekile emphefumlweni kanjalo umxholo walo nyaka uthi ‘Kwangqitywa’
Iindlela zokunciphisa ulwaphulo mthetho
Njengenxalenye yomkhankaso wokuchasana nokuxhatshazwa kweziyobisi notywala ophehlelelwe ngenyanga yoMnga kunyaka ophelileyo, isebe lophuhliso lwentlalo libambe imiboniso kumaziko-mfundo anomsila kuzwelonke. Ukanti ngokomthetho wamashumi asixhenxe womnyaka ka2008 ojongene nokuthintelwa kokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, eli sebe kufuneka likhokele ukuseka iinkqubo nongenelelo lokuthintela ukwenyuka kweziganeko ezayamene noku. Ngokweenkcukacha-manani zombutho ohlola iindlela zokusetyenziswa kweziyobisi kweli loMdibaniso, bangamawaka alishumi anamashumi amane anesixhenxe abantu abafakwe kumaziko okunyanga abo babe ngamaxhoba eziyobisi. Ukanti ukuxhatshazwa kweziyobisi kwayamene nomyinge wamashumi amathandathu ekhulwini eziganeko zolwaphulo-mthetho kwakunye nomyinge wamakhulu asibhozo okubhubha kwabantu abangamadoda. Kungokunje enye yeendibano zalo mkhankaso ibanjelwe eCPUT kwicandelo leli ziko eliseBellville.
Unikwe uphuma phele umbutho webhola kumasango eAthlone
Umasipala wesixeko seKapa uxelele umbutho webhola ekhatywayo welizwe loMzantsi Afrika kweli leKapa ukuba uphume uphele kumasango ebala lezemidlalo i-Athlone phambi kokusongwa kosuku lwanamhlanje ngenxa yokuba umda walo awusikelwanga iintshukumo zoshishino kwakunye neengxaki zokhuseleko. Oku kuzakuthetha ukuba ngenyanga yoMdumba eqala ngomso i-SAFA eKapa ayisayi kuba nakhaya nalapho umongameli wayo umnumzana Bennett Bailey athi lo mbutho awunazicwangciso zokuphuma kula masango kwaye umile kwinkolo yokubaluleka kwebala laseAthlone kwibhola ekhatywayo yeli leKapa. OkaBailey uthi isixeko seKapa sifedile ukuzathuza ngokukuko kwakunye nokuvelisa iqhinga lesisombululo.
Willie Hofmeyer ukhwela kwiqonga lobungqina namhlanje
Obefudula eligosa eliphezulu kwiNPA uKaren van Rensburg uxelele ikomishoni kaJaji Mokgoro ukuba amanyathelo oluleko ngakulowo wayesakuba ngumtshutshisi uAdvocate Glynnis Breytenbach aqhuba ngokusemthethweni nangokungenaxanasi. Ngolwesibini uBreytenbach uxelele le komishoni ukuba ukholelwa kwelokuba inyathelo loluleko ngakuye lalijoliswe ekumguzuleni kwityala elalijinga phezu kwentloko yecandelo lezobuntlola uRichard Mdluli. UVan Rensburg yayinguye umthabathi nyathelo ngakuBretenbach kwaye uxelele ikomishoni izolo ukuba wakwenza oku ngokomyalelo ongqingqwa wentloko yezotshutshiso yangelo lixa uNomgcobo Jiba. Kulindeleke ukuba isekela-ntloko lezotshutshiso uWillie Hofmeyer akhwele kwiqonga lobungqina namhlanje.
Inkampani yohambo ngololiwe i-Metrorail iyigxibhe kabukhali into eyibiza ngokuba kukudlawa kwepolitiki ngephulo lebutho lonyanzeliso mthetho kwimizila kaloliwe. Oku kuza emva kokuba amalungu eDA ebambe indibano namalungu eli butho ebutsheni bale veki nalapho phakathi kwawo kuquka lowo ugxeleshe isikhundla sokuba yinkulumbuso yeli phondo umnumzana Alan Winde, umnumzana John Steenhuisen ongusomlomo kwimiba yolwaphulo-mthetho,Usomlomo weDA kuzwelonke umnumzana Solly Malatsi nelungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo umnumzana J.P Smith. UWinde uthi ayamkelekanga kwaphela imeko yonxunguphalo loluntu xa sukuba lukhwele koololiwe kwaye kuloko betyale eli butho bengurhulumente. Ukanti,umanejala wenkqila kwaMetrorail umnumzana Richard Walker uthi ijngxaki abajamelene nazo benguMetrorail zibangelwa nayeminye imiba yentlalo yoluntu ngokubanzi kwaye ziyalahlekisa, iintetho zokuba eli butho linegalelo ekunciphiseni ulwaphulo-mthetho. Uthi ezi ntetho zinuka phuqu upolitiko lokunyiba amanqaku.
uMogoeng angakhathazeka ukuba amagosa aphangela kwiOfisi yakhe ayabandanyeka kwezobugwenxa
Iintloko yeejaji kwilizwe loMzantsi Afrika uMogoeng Mogoeng uthi angakhathazeka ngokumandla xa kunokufumaniseka kukho amagosa eOfisi yakhe abandakanyeka kwizenzo gwenxa. Oku kuza emva kokuba obesakuba yintloko yezemisebenzi kwinkampani yezokhuselo iBosasa umnumzana Angelo Agrizzi edize ukuba le nkampani ibinentsebenziswano elaqazisayo namagosa ale Ofisi. UAgrizzi uxelele ikomishoni kaZondo ukuba inkampani ephantsi kweBosasa iSondolo IT yafumana isivumelwano sentsebenziswano esixabisa intywenka yemali kwisebe lezobulungisa. Uthi abantu abathile kweli sebe bafunjathiswa iqhosha elingenantunja khon’ukuze baphembelele isigqibo sokunikezelwa ngesiniki-maxabiso kwiBosasa. Ezi zityholo zikhokelele ekubeni unobhala wekomishoni uKhotso De Wee athabathe ikhefu elikhethekileyo emva kokubandakanywa kwakhe nguAgrizzi.